“မိန်းမ မတက်ရတဲ့ …ဘုရားများဆိုတာ” – ရှအေလငျး
မက္က ဆီကို နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ခရစ်ယာန်များတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီ မက္ကဆီကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်စ လူ (၃၀) လောက် မြန်မာပြည် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝင်ဖူးပြီးတော့ စစ်ကိုင်း ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာပြီး ပါချုပ်ဆရာတော် ကျောင်း ရောက်လာပြီးတော့ ကျောင်းစောင့်တွေကို ခွင့်တောင်းတယ်။ “ဆရာတော်နဲ့တွေ့တုန်း မေးစရာရှိတာလေး မေးချင်ပါတယ်” တဲ့။
ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေကတွေ့တဲ့အခါ မက္ကဆီကန်သူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ဘာမေးတုန်း ဆိုရင် “ဘုရားကြီး ဝင်ပြီး ဖူးတဲ့အခါမှာ (အမျိုးသမီးမဝင်ရ) ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေ့လာ တယ်တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာက အဲဒီလို ခွဲခြား ဆက်ဆံ သလား” တဲ့။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နေရာ အတော်များများမှာ အဆိုပါ ဆိုင်းပုဒ်နဲ့ စည်းကမ်းလေး တွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဥပမာ – ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ အလယ်ပစ္စယံ မှာဆိုရင် “အမျိုးသမီး မတက်ရ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ထားတာ ရှိတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားမှာ ကျတော့လဲ “တံတားကို အမျိုးသမီး မကူးရ” ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီနိုင်ငံအကြောင်း သိပ်မသိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန် Tour Guide တွေ ခဏခဏ ပြဿနာတက်တတ် ကြတယ်။
ဆိုတော့ အခုလည်း မက္ကဆီကန်က အသစ်စက်စက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ခါစ နိုင်ငံခြားသူ က မကျေနပ် ဘူး။ သူတို့ နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေက အင်မတန် စူးစမ်းကြတာလေ။ တစ်ခုခု ဆိုရင် တိကျတဲ့ အဖြေမရ မချင်း ဇွတ်ကို မေးနေမှာ။ ခုလဲ ဒီကိစ္စကို မရဘူး။ သူလက်မခံဘူးပေါ့။ သူက ယောက်ျားရှေ့က နေချင်တာ။ အဲ့တော့ ယောက်ျားတွေချည်း တစွက်စွက် ဝင်သွားပြီး မိန်းမသားတွေ မဝင်ရဘူး ဆိုတော့ ဒါက မိန်းမသားတွေကို ဘာသာရေးမှာ သက်သက် နှိမ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်ကြောင်း ပါချုပ် ဆရာတော်ကို လျှောက်တယ်။
ပါချုပ် ဆရာတော် က ဘာပြန်မိန့်သလဲဆိုတော့ – “This is not Buddhism. This isatradition.” ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့။ ဒါဟာ “tradition” မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ ခေါ်တယ်လို့ ပြောတော့မှ ကျေနပ် သွားတယ်။
Tour Guide လုပ်တဲ့ လူတွေကိုလည်း ပါချုပ်ဆရာတော်ဟာ တဆက်ထဲမှာလိုက်တယ်။ “မင်းတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ လျှောက်မပြောနဲ့။ Guide လုပ်တဲ့လူကို အဲဒီလိုမေးလိုက်လို့ Guide ဖြစ်တဲ့လူက အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ ဘုရားရှေ့မှာ မတော်လို့လို့၊ ထမီတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီး အဲဒီလိုတွေ မပြောနဲ့တဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ထမီ ခေါင်းပေါင်းပြီး ရေချိုးတဲ့ ယောက်ျား တောင် ရှိသေးတယ်တဲ့” ဆရာတော်က မိန့်တယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်က – “သီဟိုဠ်မှာဆိုရင် သူတလှည့် ကိုယ်တလှည့် ဝတ်နေတာ။ ထမီရယ် လုံချည်ရယ် ရှိတာ မဟုတ်ပဲ။ ဘာမှ မထူးဘူး။ ခေါင်းအုံးပေါ်လဲ ခြေထောက် တင်တာပဲ အဲဒီလူတွေ။ အဲဒီတော့ ခြေထောက်က နိမ့်ကျပြီး ခေါင်းက မြတ်တယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ် ပြောလို့ ရမှာလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာ တူတူပဲပေါ့။
သို့သော် ဗမာတွေ အယူအဆနော်။ ခေါင်းရင်းဆိုရင် အမွန်အမြတ် ထားတယ်လေ။ ခေါင်းရင်းကို ခြေထောက်ထားရင် အလွန်စိတ်ဆိုးမယ်။ ဒါက tradition ပဲပေါ့။ ခေါင်းမကိုင်နဲ့ ခေါင်းကိုင်ရင် မကြိုက် ဘူး။ ထိုင်းလေးတွေဆိုရင် ခေါင်းသွားကိုင်ရင် ရန်သူပဲ။ အဲဒါ သီဟိုဠ်တွေက ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး။ လူကို ချစ်လို့ရှိရင် ခေါင်းကိုင်တယ်။
အဲဒီလိုမျိုးတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး tradition တွေက မတူဘူး။ ပြီးတော့ သီဟိုဠ်တို့ Chinese တို့က တစ်ခုခုပြရင် လက်နဲ့ မပြဘူး။ ခြေထောက်နဲ့ ပြတယ်။ (ဗမာကျတော့ ဒါ အင်မတန်ရိုင်းတယ်) ဒါ သူတို့ tradition ပဲလို့ ကိုယ်က နားလည်လို့ရှိရင် ပြဿနာ မဖြစ်ဘူး။ “ဟာ ဒီကောင် ရိုင်းလှချည်လား” ဆို ရန်ဖြစ်ကြ။ သူကလဲ ဘာရိုင်းမှန်း မသိဘူး။ ရိုင်းလှချည်လားဆို သူ့ကိုယ်သူလဲ ဘာရိုင်းမှန်းမှ မသိတာ။ သူ လုပ်နေကျပဲ ခြေထောက်နဲ့ ပြတယ်လေ။ ဒါ သူ့ ခြေထောက် အားလို့ ခြေထောက်နဲ့ ပြတာပေါ့။ ကိုယ်အားတာ ကိုယ်လုပ်တာ။ လက်နဲ့ ခြေထောက် တူတူပိုင်တာပဲ။
သို့သော် tradition အရ ဒါတွေ ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။အဲဒီလို ယူဆတာ။
သီဟိုဠ်ကျွန်း သွားကြည့်ရင် တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေက ဒူးတုပ်ပြီး မထိုင်နိုင်ဘူး။ ဘာလုပ်တုန်း။ ဘုန်းကြီးဘက် ခြေထောက်လေးတွေ ဆင်းပြီး ထိုင်ကြတယ်။ အမျိုးသားတွေက ဒူးထောင်ပေါင်ကား ထိုင်ကြတယ်။ အဲတော့ အမျိုးသမီးတွေထိုင်တာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘုန်းကြီး ဘက်ကို ခြေဆင်းထိုင်ကြတယ်။ လက်အုပ်တော့ ချီထားတယ်။ ခြေစုံလက်စုံမိုးတယ် ဆိုတာ အဲဒါ ခေါ်တာ။ ဒါ ဗုဒ္ဓဂယာ သွားတဲ့လူတွေ သီဟိုဠ်အဖွဲ့ ဘုရားဖူးလာတယ်ဆိုရင် တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ တွေ့ရတတ်တာပဲနော်။ ခြေစုံလက်စုံမိုး ဒါ သူတို့ tradition ပဲ။ သွားပြောလို့ မရဘူးလေ။
သူတို့မှာ ခြေထောက်ကို ယုတ်ညံ့တယ်လို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ ဗမာကတော့ ခြေထောက်ကို အလွန် ယုတ်ညံ့တယ်။ ယုတ်ညံ့သည့်အတွက်ကြောင့် လူကြီး၊ သူကြီးရှေ့ဆိုရင် ခြေထောက်ဖော် မထိုင်ရဘူး။ နောက်ပစ်ထားရတယ်နော်။ သူတို့ကျတော့ ခြေထောက်နဲ့ ခေါင်း တူတူပဲ။ ဘာမှ မထူးဘူး။
အေး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ အမှန်တွေဟာ ဒီ tradition တွေကနေ ခွဲထွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ tradition တွေကနေ ခွဲမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရောထွေး ဝင်ရောက် နေတာ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ အစစ်က ခုနက ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ။
ဘယ်အချိန်လုပ်လုပ် ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတဲ့ နက္ခတ်ပဲ။ ကောင်းကင်က ကြယ်တွေက ကိုယ့် ကိုဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကောင်းကင် နက္ခတ်တွေက ကိုယ့်ကို ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ် လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ပဲ နားလည်ရမယ်။ အကုသိုလ် မဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ ကုသိုလ် ဖြစ် အောင် သတိဆောင်ရမယ်။ ဒါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ အခြေခံပဲ။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ် မှန်သမျှ လုပ် ကောင်းတယ်။ အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ မလုပ်ကောင်းဘူး။ ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်တယ်။”
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်
မက်က ဆီကို နိုငျငံဆိုတာ အားလုံးသိကွတဲ့ အတိုငျးပဲ ခရဈယာနျမြားတဲ့ နိုငျငံ။ အဲဒီ မက်ကဆီကိုက ဗုဒ်ဓဘာသာ ဖွဈစ လူ (၃၀) လောကျ မွနျမာပွညျ ရောကျလာတယျ။ ရောကျလာတဲ့အခါကတြော့ မန်တလေးက မဟာမွတျမုနိဘုရားကွီး ဝငျဖူးပွီးတော့ စဈကိုငျး ရောကျလာတယျ။ ရောကျလာပွီး ပါခြုပျဆရာတျော ကြောငျး ရောကျလာပွီးတော့ ကြောငျးစောငျ့တှကေို ခှငျ့တောငျးတယျ။ “ဆရာတျောနဲ့တှတေု့နျး မေးစရာရှိတာလေး မေးခငျြပါတယျ” တဲ့။
ဒါနဲ့ ဆရာတျောကို နိုငျငံခွားသားတှကေတှတေဲ့အခါ မက်ကဆီကနျသူ အမြိုးသမီး တဈယောကျက ဘာမေးတုနျး ဆိုရငျ “ဘုရားကွီး ဝငျပွီး ဖူးတဲ့အခါမှာ (အမြိုးသမီးမဝငျရ) ဆိုတဲ့ ဆိုငျးဘုတျ တှလေ့ာ တယျတဲ့။ ဗုဒ်ဓဘာသာက အဲဒီလို ခှဲခွား ဆကျဆံ သလား” တဲ့။
မွနျမာ နိုငျငံမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ ထိစပျနတေဲ့ နရော အတျောမြားမြားမှာ အဆိုပါ ဆိုငျးပုဒျနဲ့ စညျးကမျးလေး တှေ တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဥပမာ – ရှတေိဂုံဘုရားရဲ့ အလယျပစ်စယံ မှာဆိုရငျ “အမြိုးသမီး မတကျရ” ဆိုတဲ့ ဆိုငျးဘုတျထောငျ ထားတာ ရှိတယျ။ ကြိုကျထီးရိုး ဘုရားမှာ ကတြော့လဲ “တံတားကို အမြိုးသမီး မကူးရ” ဆိုတာမြိုးတှေ ရှိတယျ။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ ဒီနိုငျငံအကွောငျး သိပျမသိတဲ့ နိုငျငံခွားသား ဧညျ့သညျတှနေဲ့ ဧညျ့လမျးညှနျ Tour Guide တှေ ခဏခဏ ပွဿနာတကျတတျ ကွတယျ။
ဆိုတော့ အခုလညျး မက်ကဆီကနျက အသဈစကျစကျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဖွဈခါစ နိုငျငံခွားသူ က မကနြေပျ ဘူး။ သူတို့ နိုငျငံခွားက လာတဲ့ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးတှကေ အငျမတနျ စူးစမျးကွတာလေ။ တဈခုခု ဆိုရငျ တိကတြဲ့ အဖွမေရ မခငျြး ဇှတျကို မေးနမှော။ ခုလဲ ဒီကိစ်စကို မရဘူး။ သူလကျမခံဘူးပေါ့။ သူက ယောကျြားရှကေ့ နခေငျြတာ။ အဲ့တော့ ယောကျြားတှခေညျြး တစှကျစှကျ ဝငျသှားပွီး မိနျးမသားတှေ မဝငျရဘူး ဆိုတော့ ဒါက မိနျးမသားတှကေို ဘာသာရေးမှာ သကျသကျ နှိမျတယျလို့ စိတျထဲမှာ ထငျကွောငျး ပါခြုပျ ဆရာတျောကို လြှောကျတယျ။
ပါခြုပျ ဆရာတျော က ဘာပွနျမိနျ့သလဲဆိုတော့ – “This is not Buddhism. This isatradition.” ဒါ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ မဆိုငျဘူးလို့။ ဒါဟာ “tradition” မွနျမာတို့ရဲ့ ဓလထေုံ့းစံ ချေါတယျလို့ ပွောတော့မှ ကနြေပျ သှားတယျ။
Tour Guide လုပျတဲ့ လူတှကေိုလညျး ပါခြုပျဆရာတျောဟာ တဆကျထဲမှာလိုကျတယျ။ “မငျးတို့ ရှညျရှညျဝေးဝေးတှေ လြှောကျမပွောနဲ့။ Guide လုပျတဲ့လူကို အဲဒီလိုမေးလိုကျလို့ Guide ဖွဈတဲ့လူက အယောငျယောငျအမှားမှားနဲ့ အမြိုးသမီးဆိုတာ ဘုရားရှမှေ့ာ မတျောလို့လို့၊ ထမီတှနေဲ့ ဘာဖွဈလို့ ညာဖွဈလို့ ဆိုပွီး အဲဒီလိုတှေ မပွောနဲ့တဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ထမီ ခေါငျးပေါငျးပွီး ရခြေိုးတဲ့ ယောကျြား တောငျ ရှိသေးတယျတဲ့” ဆရာတျောက မိနျ့တယျ။
ဆကျလကျပွီး ဆရာတျောက – “သီဟိုဠျမှာဆိုရငျ သူတလှညျ့ ကိုယျတလှညျ့ ဝတျနတော။ ထမီရယျ လုံခညျြရယျ ရှိတာ မဟုတျပဲ။ ဘာမှ မထူးဘူး။ ခေါငျးအုံးပျေါလဲ ခွထေောကျ တငျတာပဲ အဲဒီလူတှေ။ အဲဒီတော့ ခွထေောကျက နိမျ့ကပြွီး ခေါငျးက မွတျတယျလို့ ဘယျလိုလုပျ ပွောလို့ ရမှာလဲ။ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးဟာ တူတူပဲပေါ့။
သို့သျော ဗမာတှေ အယူအဆနျော။ ခေါငျးရငျးဆိုရငျ အမှနျအမွတျ ထားတယျလေ။ ခေါငျးရငျးကို ခွထေောကျထားရငျ အလှနျစိတျဆိုးမယျ။ ဒါက tradition ပဲပေါ့။ ခေါငျးမကိုငျနဲ့ ခေါငျးကိုငျရငျ မကွိုကျ ဘူး။ ထိုငျးလေးတှဆေိုရငျ ခေါငျးသှားကိုငျရငျ ရနျသူပဲ။ အဲဒါ သီဟိုဠျတှကေ ဘာရယျ မဟုတျဘူး။ လူကို ခဈြလို့ရှိရငျ ခေါငျးကိုငျတယျ။
အဲဒီလိုမြိုးတှေ တဈဦးနဲ့တဈဦး tradition တှကေ မတူဘူး။ ပွီးတော့ သီဟိုဠျတို့ Chinese တို့က တဈခုခုပွရငျ လကျနဲ့ မပွဘူး။ ခွထေောကျနဲ့ ပွတယျ။ (ဗမာကတြော့ ဒါ အငျမတနျရိုငျးတယျ) ဒါ သူတို့ tradition ပဲလို့ ကိုယျက နားလညျလို့ရှိရငျ ပွဿနာ မဖွဈဘူး။ “ဟာ ဒီကောငျ ရိုငျးလှခညျြလား” ဆို ရနျဖွဈကွ။ သူကလဲ ဘာရိုငျးမှနျး မသိဘူး။ ရိုငျးလှခညျြလားဆို သူ့ကိုယျသူလဲ ဘာရိုငျးမှနျးမှ မသိတာ။ သူ လုပျနကေပြဲ ခွထေောကျနဲ့ ပွတယျလေ။ ဒါ သူ့ ခွထေောကျ အားလို့ ခွထေောကျနဲ့ ပွတာပေါ့။ ကိုယျအားတာ ကိုယျလုပျတာ။ လကျနဲ့ ခွထေောကျ တူတူပိုငျတာပဲ။
သို့သျော tradition အရ ဒါတှေ ရိုငျးစိုငျးတယျလို့ ယူဆတယျ။ ယဉျကြေးတယျလို့ ယူဆကွတယျ။အဲဒီလို ယူဆတာ။
သီဟိုဠျကြှနျး သှားကွညျ့ရငျ တရားနာပွီဆိုလို့ရှိရငျ အမြိုးသမီးတှကေ ဒူးတုပျပွီး မထိုငျနိုငျဘူး။ ဘာလုပျတုနျး။ ဘုနျးကွီးဘကျ ခွထေောကျလေးတှေ ဆငျးပွီး ထိုငျကွတယျ။ အမြိုးသားတှကေ ဒူးထောငျပေါငျကား ထိုငျကွတယျ။ အဲတော့ အမြိုးသမီးတှထေိုငျတာ ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျ ဘုနျးကွီး ဘကျကို ခွဆေငျးထိုငျကွတယျ။ လကျအုပျတော့ ခြီထားတယျ။ ခွစေုံလကျစုံမိုးတယျ ဆိုတာ အဲဒါ ချေါတာ။ ဒါ ဗုဒ်ဓဂယာ သှားတဲ့လူတှေ သီဟိုဠျအဖှဲ့ ဘုရားဖူးလာတယျဆိုရငျ တှလေိ့မျ့မယျ။ ဒီအတိုငျးပဲ တှရေ့တတျတာပဲနျော။ ခွစေုံလကျစုံမိုး ဒါ သူတို့ tradition ပဲ။ သှားပွောလို့ မရဘူးလေ။
သူတို့မှာ ခွထေောကျကို ယုတျညံ့တယျလို့ မသတျမှတျဘူး။ ဗမာကတော့ ခွထေောကျကို အလှနျ ယုတျညံ့တယျ။ ယုတျညံ့သညျ့အတှကျကွောငျ့ လူကွီး၊ သူကွီးရှဆေို့ရငျ ခွထေောကျဖျော မထိုငျရဘူး။ နောကျပဈထားရတယျနျော။ သူတို့ကတြော့ ခွထေောကျနဲ့ ခေါငျး တူတူပဲ။ ဘာမှ မထူးဘူး။
အေး မွတျစှာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ အမှနျတှဟော ဒီ tradition တှကေနေ ခှဲထှကျဖို့ လိုအပျတယျ။ tradition တှကေနေ ခှဲမထှကျနိုငျဘူးဆိုရငျ ဗုဒ်ဓရဲ့ အဆုံးအမလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရောထှေး ဝငျရောကျ နတော။ ဗုဒ်ဓရဲ့ အဆုံးအမ အစဈက ခုနက ပွောတဲ့ အတိုငျးပဲ။
ဘယျအခြိနျလုပျလုပျ ကောငျးတာ လုပျရငျ ကောငျးတဲ့ နက်ခတျပဲ။ ကောငျးကငျက ကွယျတှကေ ကိုယျ့ ကိုဘာမှ မတတျနိုငျဘူး။ ကောငျးကငျ နက်ခတျတှကေ ကိုယျ့ကို ဘာမှ မတတျနိုငျဘူး။ ကိုယျ လုပျသငျ့ မလုပျသငျ့ ကိုယျ့ဟာ ကိုယျပဲ နားလညျရမယျ။ အကုသိုလျ မဖွဈအောငျ လုပျရမယျ။ ကုသိုလျ ဖွဈ အောငျ သတိဆောငျရမယျ။ ဒါ မွတျစှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ အခွခေံပဲ။
မွတျစှာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို အနှဈခြုပျပွောရမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ကုသိုလျဖွဈတဲ့အလုပျ မှနျသမြှ လုပျ ကောငျးတယျ။ အကုသိုလျဖွဈတဲ့ အလုပျမှနျသမြှ မလုပျကောငျးဘူး။ ဒီလိုပဲ သတျမှတျတယျ။”
အပွညျပွညျဆိုငျရာ ထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓသာသနာပွု တက်ကသိုလျ
“ဝိတ်ချချင်သူများအတွက်… မျှစ်သုပ် စားပြီး …အဆီချမယ်။”
ဇနီးအယောက် ၁၂၀ ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လူမှုကွန်ရက်တွင် နာမည်ကြီးနေ
ချက်​ခြင်းသောက်​ပြီး သိန်း (၆၀၀) ကံစမ်းမဲ ပေါက်​/မပေါက်​ ဝေဝါးနေသော ယမကာလုလင်​ (ရုပ်သံ)
ဆီးနီ၊ ဆီးဝါ၊ ဆီးချုပ်၊ ဆီးအောင့်၊ ဆီးပူး၊ ဆီးကျဉ်၊ ဆီးကျန် ဖြစ်ပါလျှင် အရှင်းပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်း
” မော်လမြိုင်မြို့ စိန်မမ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပျံလွန်တော်မမူခင်...
မြန်မာပြည်က သံဃာမလျော့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီး ကြည်ညိုစရာ အပြည့်နဲ့ ကျောင်းတိုက်ကြီး
ရွှေဆိုင် ပိုင်ရှင်ကို တို့ဆေးဖြင့် တို့ပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းများကို လိမ်ယူသွားတဲ့...
“သားငယ်လေး ပြေဓီရအတွက် ဖေဖေ့ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း”